Weerarka Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada SL ku hayo Shirkadaha Shidaalka iyo xidhiidhkiisa Puntland | Somaliland.Org
September 29, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland ayaa la xaqiijiyey in kala shaqaynayo Maamul-goboleedka Puntland ee Soomaaliya isku day uu maamulkaasi doonayo inuu carqaladeeyo sahaminta iyo baadhista Shidaalka Somaliland.
Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha Somaliland oo mar ka jawaabtey eedaymahaas ayaa ku tilmaantay hadalka Xildhibaanka arrin uu ka dambeeyo Maamul-goboleedka Soomaaliya ee Puntland, waxayna masuuliyiinta Wasaaradda Macdanta iyo Biyuhu iftiimisay in Puntland iyadoo tartan xintan ah kula jirta Somaliland ay hadda ku hawlan tahay inay hesho shirkad u samaysa sahamin la mid ah tii TGS/NOPEC u samaysay Somaliland. Sidaa darteedna ay isku deyayaan inay carqaladeeyaan midha-dhalka sahamintii laga sameeyey Somaliland.
Dareenkaa masuuliyiinta Wasaaraddu ka bixiyeen hadalka xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi, waxa xaqiiqadiisa xoojinaya laba warsaxaafadeed oo uu xildhibaankaasi ku faafiyey Website-ka Puntland ee Garoweonline, isagoo sheeganaya Xoghayaha Guddi-hoosaadka Golaha ee Khayraadka Dabiiciga ah, taasoo muujinaysa inuu jiro xidhiidh arrintan ku saabsan oo uu la leeyahay Puntland.
Dhinaca kalena, labada warsaxaafadeed oo uu ku qoray Af Ingiriisi, xildhibaanku wuxuu kaga hadlay labada shirkadood oo keliya, wuxuuna si cad ugu sheegay, kana digey in heshiiska xukuumadda Somaliland la gashay labadaa Shirkadood TGS/NOPEC iyo ASATE Oil uu “haddaba ka dhaliyey gobolada bari ee Somaliland xasaasiyad siyaasadeed, isla markaana uu abuuray shaqaaqo ku salaysan maamulka iyo khayraadka”.
Ma jirto wax xiisad ama khilaaf ah oo ka dhashay arrintan oo ka taagan gobolada bariga Somaliland ee xildhibaanku sheegay, wax faahfaahin ahna kama bixin sida iyo qaabka iskudhac ama shaqaaqo ku salaysan maamul iyo dhaqaale uga dhalan karo hawlgalada labadaa shirkadood, iyada oo labada xidhmo (Blocks) ee SL14 iyo SL15 ay yihiin deegaamada Caynabo iyo Gar’adag oo maamulka Somaliland ka taliyo, isla markaana dadka deegaamadaasi aanay weli ka soo bixin wax cabasho ah, ayna soo dhoweyn doonaan maalgashiga iyo soo saarista khayraadka dhulkooda ku jira.
Waxaana la filayaa in xildhibaanku ka hadlayo gobolka Sool ee uu ka soo jeedo iyo Sanaag-bari, dhulkaas oo ay jiraan meelo maamul-goboleedka Puntland uu sheegto inuu ka taliyo, isla markaana uu u doodayo maamulka Puntland oo diiddan in dhulka Somaliland ee uu isir ahaanta ku sheeganayo in lagu daro sahanka Shidaalka ee ay qaadday shirkadda TGS/NOPE, iyada oo uu maamulkaasi doonayo inuu isagu ku darsado sahanka uu doonayo inuu ka sameeyo gobolkiisa.
Waxa kale oo ka dhadhamaysa warsaxaafadeedka Xildhibaanka in uu ka dagaalamayo hawlgalka labada shirkadood iyo waxqabadkooda oo ah mid qayb ahaan la fuliyey, ka kale oo ah baadhista shidaalkana ay shirkaddu ballanqaadday inay dhakhso u bilaabayso.
Wax muran ahi kama taagna waajibka Golaha Wakiilladu u leeyahay in la horgeeyo heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu gasho, isla markaana ma jiro heshiis caalami ah oo ilaa iyo hadda xukuumaddu u gudbisey Golaha Wakiillada, iyada oo heshiisyada labadan shirkadood ee Norwegian-ka ahi aanay ahayn kuwii u horreeyey. Masuuliyiinta Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha ayaa iyaduna dafirsanayn xaqa loogu leeyahay xukuumadda inay Golaha Wakiillada horgeyso heshiisyada caalamiga ah ee ay gasho, waxayna ku dooddaa wasaaraddu in heshiisyadaasi ay ku jiraan dariiqii loogu soo gudbinayey Golaha Wakiillada, isla markaana marka ay dariiqooda dhammaystaan ee Golaha Xukuumaddu ansixiyo ay khasab tahay in la horgeeyo Golaha Wakiillada si uu u ansixiyo. Sidoo kale, Madaxda labada shirkadood ee Norwegianka ah ayaa iyaguna ku doodaya in aan xaq loogu lahayn eedaynta ah in heshiisyada ay la galeen xukuumadda aan la horgeynin Golaha Wakiillada, hawshaasina ay tahay mid u dhexaysa golayaasha qaranka, isla markaana iyaga dantoodu ku jirto in golayaasha oo dhan la mariyo heshiiskooda. Waxa kale oo ay madaxda shirkadahaas iyo dad muwaaddiniin ah oo suurageliyey inay dalka yimaaddaan ay ku cabanayaan in Somaliland oo aan la aqoonsanayn ay u badheedheen in ay hanti malaayiin dollar ah ku maalgeliyaan, taas oo ay ku ammaanayaan dedaal ay sameeyeen muwaaddiniin Somaliland u dhashay oo qurbaha jooga iyo masuuliyiinta Somaliland oo muujiyey rabitaan iyo heellanaan inay wax wada qabsadaan.
Taariikhda habdhaqanka xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi ayaa iyaduna ah mid qiimayn hoose siinaysa eedaha iyo dhalliilaha uu jeediyey, isla markaana taageeraysa dareenka Wasaaradda Macdanta iyo Biyuhu ka bixisay hadalkiisa.
Xildhibaan Siciid waxa uu Golaha Wakiillada ku soo galay liiskii xisbiga UCID ee gobolka Sool deegaamadii aanay doorashadu ka dhicin (proportional), balse, wax yar kadib ku dhawaaqistii natiijada doorashada waxa uu ka baydhay xisbigaas uu ka soo baxay, waxana uu hoggaanka xisbigaasi isku deyey inuu xubinnimada ka qaado, isaga oo u gudbiyey Maxkamadda Sare dacwad uu ku dalbanayo in xubinimada Golaha Wakiillada qaado xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi, maadaama xisbigiisu sidaa go’aan ku gaadhey. Hase yeeshee, dacwaddaas iyo go’aanka xisbigaba laalay Maxkamadda Sare oo weydey sharci ansixinaya go’aanka xisbigu kaga qaaday xubinnimada ninka xildhibaanka ah.
Sidaa darteed, muddadii uu golaha ku jireyba wuxuu dayro ka ahaa xisbigiisa, wuxuuna noqday xildhibaanka aan xisbina ka tirsanayn ama loogu yeedhi karo “Freelance MP”, isagoo inta badanna la olog ahaa xildhibaanada xisbiga talada haya ee UDUB. Waana markii u horreysey ee uu si cad uga horyimaaddo xukuumadda iyo waxa ay wadato, sidoo kalena waa markii u horreysey ee xildhibaankani uu si caam ah uga hadlo mawduuc khuseeya shuruucda iyo nidaamka dalka.
Si kastaba ha ahaatee, Golaha Wakiillada, Shirguddoonkiisa iyo guddi-hoosaadyadiisa waxa looga baahan yahay inay xukuumadda culays ku saaraan wixii ay waajib dastuuri ah ugu leeyihiin, balse, ay ka taxadiraan in magaca Golaha Wakiillada looga faa’iideysto dano shakhsi ah iyo wax dhaawacaya sumcadda iyo danaha qaranka Somaliland.